Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 30
Vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izao…
Par Taratra sur 05/03/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Anisan’ny mampiavaka izao fitondrana izao ary tsy misy mahavita ny vitany tao anatin’ny 50 taona mahery ny fikorontanan’ny raharaham-pirenena: tsy fandriampahalemana, tsy fanarahan-dalàna, fivarotan-tanindrazana, fitsaram-bahoaka, fidangan’ny vidim-piainana, fahapotehan’ny fiainam-bahoaka, harem-pirenena gaboraraka, fanjakazakan’ny vahiny, tsy fisian’ny asa, ny fanjakan’ny tsimatimanota, kolikoly avo lenta… Samy efa nisy izany avokoa ny fitondrana nifandimby, fa mampitampim-bava sy mampiteny ny […]
Ampiharo ny lalàna raha fanjakana tan-dalàna
Par Taratra sur 02/03/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Nihemotra ny laharan’i Madagasikara amin’ny lafiny ady amin’ny kolikoly. Singa iray ao anatin’ny fanjakana tan-dalàna ny kolikoly, fa mifandrohy amin’ny fampiharana ny lalàna ihany koa. Hita any amin’ny sehatra maro ny tsy fampiharana ny lalàna eto amintsika miseho amin’ny endriny maro, manaratsy endrika an’i Madagasikara. Raisina ohatra mibaribary ity fandringanana ny varika, biby arovana satria […]
Tsy misy tsy miaka-bidy…
Par Taratra sur 01/03/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Miakatra ny vidim-piainana … Ohatrinona marina? Tsy misy te hamaly izany, fa ny tsapa sy ny iainana isan’andro aloha no itarafana azy. Ireo manan-katao, heverina ho tsy hitam-pahavaratra ary tombanana ho manan’amby mandavan-taona aza, mimenomenona amin’izao fotoana izao. Mety tsy tena sahirana loatra, saingy nihena ny miditra na nihakely ny tahiry… Fa ny sarambambeny ity, miady […]
feno fitaka sy lainga
Par Taratra sur 28/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Raikitra ihany ilay fivoriana tsy ara-potoana ataon’ny Parlemanta: Antenimierandoholona sy ny Antenimierampirenena, andinihina indrindra ny volavolan-dalàna hifehy ny fifidianana ho avy. Tsotra ny hevitry ny HVM raha ny fahitana azy avy aty ivelany. Atao izay tsy hahafahan’ireo kandidà hafa maniry ny hofidiana ho filoham-pirenena, hilatsaka amin’ny fomba rehetra. Tsapa fa matahotra tanteraka izy ireo. Porofon’izany, […]
« … antsika daholo daholo daholo e ! »
Par Taratra sur 27/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny nofony no nodimandry fa ny zava-bitany eo amin’ny tontolon’ny zavakanto, mitoetra hatrany. Ampahany amin’ny tononkira noforonin’i Tsilavina Ralaindimby ny « … Antsika daholo daholo daholo e ! ». Ny vahoaka io ambaran’i zokibe Tsitsy io fa tompon’ny basy (… Satria ny miaramila mitana basy dia ny vahoaka no nipoirany), tompon’ny angady, tompon’ny saina, tompon’ny sandry, tompon’ny tany, […]
Matanjaka amin’ny halemena…
Par Taratra sur 26/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy mitsahatra ny fahapotehan’ny fiainam-bahoaka. Mihamitombo, mihalalina… Mandra-pahoviana? Tsy misy inona azo anantenaina intsony amin’izao fitondrana izao; eny, na inona filaza, fanamarinan-tena, fampanantenana… Vao mainka mihasarotra aza ny tsy fandriampahalemana, ohatra, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fisian’ny asa, ny fandrobana tany, ny kolikoly… Inona no afitsoky ny mpitondra amin’izany? Vina any amin’ny taona 2030. Ny […]
Mba tsy ho sasatry ny miarina…
Par Taratra sur 24/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Fitsapan-kevi-bahoaka hanitsiana ny lalàmpanorenana, fifidianana filohan’ny Repoblika, fampihavanam-pirenena… Inona koa? Tokony hifanazava sy hifameno ireo raharaha ireo hizorana ho amin’ny fitoniana sy fahamarinan-toerana hiatrehana ny tena fampandrosoana. Nefa tsy izany no mitranga sy iainana izao na tanisaina lava aza, fa ahiahy, fifampiandrasana kendry tohina, fifanomezan-tsiny… Nahoana? Manjaka tsinona ny paipaika sy kajikajy politika maloto. Hany […]
Fampihavanana… fanilihana “kandidà”
Par Taratra sur 23/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa zary fiteny hafahafa tato ho ato ny hoe: ny vazaha, mody miady; ny Malagasy, mody mihavana. Nahoana? Hatramin’izao, ifanenjanana sy ifanenjehana mafy ny amin’ny lalàna mifehy ny fifidianana: aiza ihany? Eo hatrany ny tsy fifampitokisana sy ny fifampiandrasana kendry tohina, na inona filaza sy fanamarinan-tena afitsoky ny mpitondra. Andrasana izay ho vokatry ny fivoriana […]
… Henin-tsy tsaroana
Par Taratra sur 22/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
« Aleo tsaroana tsy henina, toy izay henin-tsy tsaroana ». Mitamberina ao an-tsaina ity fahendren’ny razantsika ity, amin’izao vaninandro mampiroborobo fatratra ny fanatontoloana izao. Mbola voaporofo ao amin’io fehezanteny io fa olon’ny fo ny Malagasy, mandala fatratra ny fifankatiavana sy ny fifaneraseran’ny mpianakavy. « Aleo tsaroana tsy henina », izany hoe, tsaratsara kokoa ny tsaroan’ny havana na tsy manan-katolotra […]
Asan-jiolahy sa fanakorontanana fanjakana ?
Par Taratra sur 21/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery no nametraka io fanontaniana io, nandritra ilay fandaharana « Fotoam-bita ». “Asan-jiolahy tsotra sa fanakorontanana fanjakana? Misy mantsy izany any amin’ny firenen-kafa”, hoy izy, mikasika indrindra ny raharaha kidnapping, izay nafanafana tato ho ato. Tsy afaka ny nangina intsony satria voaporitra na aiza na aiza ny fanjakana, mikasika ity raharaha ity. Raha zohina […]
Hadino ny tena… politika
Par Taratra sur 20/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Mandevina ny maty. Izay aloha izao no mahamaika, taorian’ireny loza nahatsiravina, namoizana ain’olona fito sy naharatrana olona valo, vokatry ny fihotsahan’ny vatobe nitera-doza teny Ampamarinana ny faran’ny herinandro lasa teo. « Loza voajanahary », hoy ny sasany. Ekena ! Misy maha marina azy ihany izany. Niaraha-nahita tokoa, tato ho ato, ny fijojon’ny orana sy ny fidaniky ny hainandro. […]
Dinika manokana… manakona ny marina
Par Taratra sur 19/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa tsy hita intsony izay hitondrana ny raharaha? Hanaovana dinika manokana amin’ny fiombonamben’ny teratany indianina, hono, rey olona, ny amin’ny fakana an-keriny. Hitadiavam-bahaolana… Maninona tsy mba hanaovana dinika manokana eny ifotony koa, ohatra, ny amin’ny asan-dahalo, ny fandrobana tany, ny halatra taolam-paty… Misy ny zanak’Ikalahafa? Na mahamena-maso ny vahiny, fa tsy mba ahoana na tsy […]
Mifampiaroaro amin’ny ratsy….
Par Taratra sur 17/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsotsorina fotsiny ny resaka. Mifampiaroaro amin’ny ratsy ka tsy mahagaga raha mihodina am-pitoerana eto hatrany isika. Matetika aza mitady sorona sy ny tratra farany ny mpitondra. Nohamaivanin-dRamatoa minisitra tsotra izao amin’ny hoe mihinam-bary aza misy latsaka na koa tsy hadisoana be vava (faute professionnel ) ireny aotra telo mihoatra amin’ny sora-bola amin’ny tsenam-baro-panjakana ireny. Ho […]
Aza maika hanameloka !
Par Taratra sur 16/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Sambany noresahina ampahibemaso ny fanalan-jaza na mbola amin’ny sehatra kelikely ihany aza, omaly, nandritra ny ora roa mahery. Olona efatra samy manana ny toerany sy ny fahaizany manokana no nitondra ny fahitany ny zava-misy sy ny tantara, miaraka amin’ny fanadihadiana manome lanja ny famelabelarany. Efa fanao hatry ny ela teto amintsika ny fanalan-jaza sy ny […]
Feno ny fonja, ny tany tsy milamina
Par Taratra sur 15/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Hipoka i Tsiafahy (jereo lahatsoratra etsy ankilany). Marobe ny azo handikana izany, fa anisan’ny nanairan’ny Amnesty International ny fanjakana ny lafiny maha olona izay tsy voahaja eny amin’ireny toby fanarenana ireny. Anisan’ny mahatonga ny fahabetsahana ny fahamaroan’ireo tsy mbola voatsara, raha ny voalazan’ny tatitra. Raha mandeha araka ny tokony ho izy anefa ny raharaham-pitsarana sy […]
zakain’ny mpanjifa avokoa
Par Taratra sur 14/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tena fanalalahana marina ! Rivotra mitsoka ao anatin’ny fanontoloana ny fanalalahana, ny tsena malalaka ka tsy voafetra intsony ny vidin-javatra fa baikoin’ny tolotra sy ny tinady. Niaina tanaty vidin-javatra feran’ny fanjakana ny malagasy tao anatin’ny ampolon-taony maro (1975-1991). Tsy nahomby izany vokatry ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra, banky rompitra ny orinasam-panjakana, tsy azo natao intsony na noferana […]
Par Taratra sur 13/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Lehibe tsy meloka, tsy mba diso… Tsy misy tsy vaky vava ny amin’ny tsy fahombiazan’izao fitondrana izao. Efa samy niala nenina ny amin’izany ny fiangonana, ny antoko politika, ny firaisamonina sivily… Inona no eo? Manilika fotsiny ny tsy fihombiazana amin’ny lasa sy ny hoe mpanohitra ny mpitondra, fa tsy mahadini-tena amin’ny tsy fisian’ny politika mazava, […]
Par Taratra sur 12/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tafaporitsaka ny fonja indray izany izao ny gadra. Efa niseho izany tany Ambatondrazaka, Tsiafahy ary izao eny Antanimora izao indray. Tany aloha, efa niseho koa ny fitsoahan’ny gadra any Toliary sy Ikongo… Mbola ifampitadiavana hatramin’izao. Izany hoe ny eo tsy hita. Izao indray efa lasa ny sasany. Ny tokony hiditra any am-ponja tsy tafiditra fa […]
Par Taratra sur 10/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Hivalona eo tokoa ny resabe mikasika ny fivoahan’ny praiminisitra hoe nanao fizaham-pahasalamana « mahazatra » tany ivelany ka nanendrena ny minisitra eo ambany Fiadidian’ny Repoblika misahana ny tetikasan’ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana hisolo vonjimaika azy ? Efa tafaverina an-tanindrazana afakomaly tolakandro, moa izy ary ity praiminisitra mpisolo toerana ity mihitsy, niaraka tamina minisitra […]
Par Taratra sur 09/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa mivadika biby… manao fanahim-biby ny olona ankehitriny raha zohina ity toe-javatra tany Vatofotsy Antsirabe ity. Efa tsy mitombina intsony ny filazan’ilay filozofa Aristote nilaza fa «Biby misaina ny olombelona » (L’homme est un animal raisonnable). Tsy vitan’olon-tsotra tokoa ny hamono olona ka hanapatapaka izany tahaka ity niseho ity. Na ny mijery sary fotsiny aza, efa […]
Tsy kajim-bahoaka fa kajy politika
Par Taratra sur 08/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Mahaiza mifidy e ! Io ny fotoana hanehoantsika ny hevitsika e ! Ho hitan’ny havany eo izay halam-bahoaka e ! sns ! Vao nipaika ny voalohan’ny taona 2018, zary resaka nameno ny lalambe sy ny isam-pianakaviana ny tahaka ireo. Toa mitory fanantenana sahady fa hanana mpitondra olom-banona i Madagasikara atsy ho atsy. Tsara ny manantena, saingy tsy azo hadinoina […]
Tsy alehany !
Par Taratra sur 07/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Petatoko, vonjy tavanandro, afo am-bilanikely, ronono an-tavy,… Lava ny lisitra. Izany ity fitondrana ity. Izany ny fanaony, ny fomba fiasany hatramin’izay, mandraka izao. Betsaka ny fisehoan-javatra eny amin’ny fiarahamonina eny azo itsarana. Tsy haka ohatra betsaka fa indreto vitsivitsy ihany, ampy hanamarinana ireo. Iray amin’ireny ity fanamboaran-dalana eto an-dRenivohitra sy ny manodidina ity. Tsy misy […]
Par Taratra sur 06/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Mihazakazaka, tsy misy toy izany ny taona 2018. Tsy hitahita akory, efa miditra amin’ny volana faharoa sahady. Mirimorimo toy izany koa ny fiainan-dRamalagasy. Miridana tsy tana ny vidim-piainana, mihodinkodina tsy fantatra hoe : hanao inona ny lalan-kalehan’ny vahoaka. Mandroso, mihemotra ny firenena. Mandroso any amin’ny tsy fantatra ary mihemotra ho an’ny fahaverezana. Mihozohozo ny tongotra, […]
Kelikely tsaratsara, be tsy andraofana…
Par Taratra sur 05/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Mbola (ho) resabe… hatramin’ny taona 2030 ny hoe fisandratan’i Madagasikara? ”Aleo mandà tsy handeha toy izay manaiky tsy ho lasa”, hoy ny ohabolan-drazana izay. Raha lazaina amin’ny fomba hafa: aleo mitanisa zavatra kely ao anatin’ny fotoana fohy, ary azo tanterahina sy mety ho vita. “Kelikely tsaratsara”, hoy ny mahay milaza. Hafa ny be tsy andraofana: […]
Kolon’aina amin’ny saina…
Par Taratra sur 03/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Anisan’ny fotaka sy fitaka amin’izao fitondrana izao ny tsy fandriampahalemana. Fotaka fa mihosina ao anaty fahalotoana ny Malagasy sy i Madagasikara noho ny asan-jiolahy mifono habibiana: vono olona, fakana an-keriny, fandrobana tany, fandravana, halatra… hatramin’ny taolam-paty avy. Fitaka koa fa kabary fandaharanasan’ny filoha tamin’ny nanaovany fianianana ny hoe mitaky famerenana hentitra sy haingana ny fandriampahalemana, […]
« Précédent 1 … 28 29 30 31 32 … 55 Suivant »